Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - June 17 - website blog - jluis37.com
England na Scotland – Oge obula Goalscorer – Harry Kane @ 1.80
Ọdụm atọ ahụ malitere mkpọsa ha nke ọma website Id mmeri 1-0 siri ike na Croatia na ngwụsị izu. Gareth Southgate nwere ike ịgbanye waistcoat, mana ọ dị ka 2018 ọzọ dịka England na-elekọta azụmahịa. Ihe mgbaru ọsọ Raheem Sterling chọkwara nkwado, yabụ ọ ga-ejupụta n’okwukwe na-abanye n’egwuregwu a, ihe ga-eweta nsogbu maka mmegide ọ bụla. N’akụkụ tụgharịa, asọmpi Scotland malitere website t mmeri 2-0 Czech Republic na Glasgow. N’agbanyeghị na enwere ohere karịa, akụkụ Steve Clarke enweghị ike ịme ohere ha, ihe mgbaru ọsọ Patrik Schick nke asọmpi asọmpi ahụ bụ ihe nnọchianya nke otu egwuregwu ahụ si pụta. Mgbe ha mechara nwee ọtụtụ nkwa, ha ga-achọ ijide n’aka na ha anaghị agba ọsọ. Ndị agbata obi na-esote England bụ ebe dị mma ịmalite. N’agbanyeghị ihe ahịa na-agwa gị, anyị chere na egwuregwu a ga-adị nso karịa ka a tụrụ anya ya ka ndị Scotland ga-achọ mkpuchi maka mmechuihu ha na Hampden Park. N’agbanyeghi ihe nsonaazụ ahụ nwere ike ịbụ, anyị na-atụ anya ka onye mmeri mmeri nke World Cup na-achị achị ịchọta ụgbụ n’oge ụfọdụ. Harry Kane dị egwu n’ihu ihe mgbaru ọsọ iji kwado ọnụahịa a, ma ya fọdụ n’eziokwu na ọ bụ otu n’ime ndị ntaramahụhụ kacha mma n’ụwa n’akụkụ Jorginho si fromtali. Egbula na nke a. 1 nkeji.
Dota two ESL 1 Summer – Team Secret vs Team Nigma – Correct Score (Id Maps) 0: 2 @ 3.20
Ọ ga-amasị m ikwere na Team Nigma nọ na njedebe na-adịghị mma nke nsogbu ọrụaka nke only ka amalitegharịa map nke abụọ. O nwere ike ịbụn’oge na-adịghị anya ịsịn’oge ahụ mana Team Nigma dị ka ọ ga – ewere map nke abụọ miniature jiri mmeri 2-0 pụta. Na map nke ewegharịrị ọzọ na otu ihe ahụ na ihe mbido, Team Secret amalarịrị ihe atụmatụ Team Nigma bụ miniature nwee ike imeghachi ya, na-atụgharị ya ka ọ bụrụ ebe nzọ ụkwụ miniature kwụsị nke kachasị mma nke usoro 2 d e ịbịaru. na Miracle laghachiri n’etiti, Team Nigma na-achọ ije ha ma nwee ike ị nweta ezigbo nsonaazụ megide ndị asọmpi EU. Nzukọ ikpeazụ kwesịrị ịbụ nke ha maka ịnara mana chi ndị sava ekweghị ha. Echere t even mmeghari that a ezuteghị hiccups ọ bụla ma hụ Team Nigma ka ọ have been maapụ 2. 1 nkeji.
Denmark na Belgium – 1 × 2 – Belgium @ 2.01
O doro anya na Denmark ga-agbasi mgba ike na-elekwasị anya maka ihe ndị only t ụbọchị ole na ole gara aga. Belgium, ebe o metụtara un t ndị ọzọ bọọlụ bọọlụ, gosipụtaran’egwuregwu mmeghe ha na ha bụn’ezie otun’ime ndị ọkacha mmasị. Anyị ga-akpọrọ ha iji merie ebe a. 2.5 nkeji.
US Open – shirt 20 Emecha – Ga Zalatoris @ 2.45
Zalatoris kachasị njọ na njedebe atọ nke isi ọ na-egwuri egwu bụ eriri maka asatọ na ọnwa gara aga na PGA Championship. Ọ bụkwa onye na-agba ọsọ na mmalite ya t Pros mgbe ọ na-achụ Hideki Matsuyaman’ụlọ na Augusta. Ndi obodo Cali ga-enwe obi uto nloghachi a t odida anyanwu un ma buru ezigbo onye nke asaa na Torrey Pines na ndi oru ugbo ndi Insurance in Jenụwarị. The elu bụ that a na-akpata na Torrey Pines ka ha na-adịghị ka onye ọ bụla si chọọ, ma Zalatoris kwuru”M hụrụn’anya poa annua elu. Ekwenyesiri m ike na m dị obere, mana m tolitere na un, t mbụ ị na-egwu un ka mma”- nnukwu akọrọ. Ma eleghị anya, nchegbu ọ na-anọgide na-enweghị mmeri na PGA Tour ka dị irè maka ọpụpụ, mana ọ nwere egwuregwu ahụ ịsọ mpi, na-eme ka ọnụahịa shirt 20 that a mara mma nke ukwuu. 1 nkeji.
UFC Fighter Night – The Korean Zombie vs. Ige – Onye mmeri – Chan Sung Jung @ 2.01
Na-abịa website Id mkpebi mkpebi siri ike ị ga – abụ Onye Nleba Anya Brian Ortega, KZ bụ obere obere underdog. Dan Ige meriri Edson Barboza nke a sachaara, ma tụfuon’ụzọ doro anya d e Calvin Kattar otu afọ gara aga. KZ laghachiri na egwuregwu ahụ afọ ole na ole mgbe ọ gbasịrị afọ atọ iji jee ozi agha ya na South Korea, nke gosipụtara ịdọ aka ná ntị ya na ike ya. Aha aha un na-enweta websiten’ọchịchọ un ịnọgide na-agan’ihu ma na-awakpo, na-agbapụ ndị iro ya. Ige na-abia na 8th nke KZ nke 4, ebe o meriri mmeri ikpeazụ ya website t ịkụ aka naanị 22 sekọndn’ime Gburugburu 1. Ọ bụ ezie na ọ dị mma, oge ọzọ na mgbanaka ahụ nwere ike itinye ya n’ọnọdụ ka mma ịlụ ọgụ megide KZ. Ige nwere ike ịbụ onye agha tozuru etozu nke ọma, mana ọ ga-abụ onye egwuregwu maka ahụmịhe na ọdịdị dị egwu nke Korea Zombie. Two Nkeji
Izu ụka that an’izu that a siteren’aka Badly bụ onye ahọrọla ihe ndị a.
Ukraine na North Macedonia – 1 × two – Ukraine @ 1.72
Enwetụbeghị mmeri Ukraine na ọpụpụ isii gara agan’afọ a, na-amalite website Id nsonye 1-1 na France miniature kwụsị na mmeri 4-0 meriri Cyprus. Egwuregwu ikpeazụ ha na Netherlands nwere ike bụrụ d e ọ ga-efu, ma mgbe ha tinyechara ihe mgbaru ọsọ two megide nnukwu ìgwè dị ike dị otú ahụ Ukraine fọrọ nke nta ka ọ daa Netherlands ikpere. Nke a bụ ihe zuru oke iji gosi na Ukraine nwere aka elu megide North Macedonia. Ka ọ dị ugbua North Macedonia bụ ndị otu kachasị dị ala na Euro 2020. Goran Pandev tinyere goolu megide Austria n’egwuregwu ikpeazụ ha mana nke ahụ ezughi iji gosipụta arụmọrụ Ukraine na egwuregwu ikpeazụ ha megide Netherlands.
Otutu nsogbu – 98.06 *
Ọ bụrụ nhọpụta izu a na-amasị gị, detuo website Id egwuregwu: 11306543!
Kachasị mman’izu ụka a! )